အစားအသောက် ၆ ပွင့် - နေ့စဉ်နှင့်ရလဒ်များအတွက်မီနူး / ဆေးတောင့် KETO Complete
အစားအသောက်6ပွင့်လွှာ- ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နှင့်အတူနေ့စဉ်အတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများ
17 ဇွန် 2022
သင် ဆွီဒင်နှင့် မည်သို့ ဆက်စပ်သနည်း။Poltava၊ ABBA အဖွဲ့၊ ဆွီဒင်မိသားစု သို့မဟုတ် ဆွီဒင်မြို့ရိုးတိုက်ပွဲ။ထို့အပြင် ၎င်းသည် "6 Petal Diet" ကဲ့သို့သော အစားအသောက်ကို တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သည့် ဆရာဝန် Anna Johansson ၏ မွေးရပ်မြေလည်းဖြစ်သည်။
သင်ချက်ချင်း စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်နိုင်သည်၊ သင်သည် တစ်နေ့လျှင် ပန်းခြောက်ပွင့် သီးသန့်စားရန် မလိုအပ်ပါ၊ အစားအသောက် သည် ပို၍ ကွဲပြားပြီး မူအရ ပန်းစားခြင်း မပါဝင်ပါ။Dr. Johansson က သူမရဲ့ အစားအသောက်ကို တစ်ပတ်မှာ5ကီလိုဂရမ် ကျစေနိုင်တယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပေမယ့် မယုံနိုင်လောက်စရာ ရလဒ်တစ်ခုပါပဲ။
ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်သည် အစားအစာတစ်မျိုးကို ပမာဏအနည်းငယ်သာ စားနိုင်သောအခါတွင် အစားအစာ၏ တစ်ရက်ဖြစ်သည်။နေ့ရက်များ၏ အစီအစဥ်သည် အရေးကြီးသောကြောင့် သင်သည် ပန်းခြောက်ပွင့်ပါသော ပန်းတစ်ပွင့်ကို ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲနိုင်ပြီး မီနူးတစ်ခုစီတွင် အမှတ်စဉ်နံပါတ်တစ်ခုရေးကာ အကြံပြုချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာနိုင်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်၊ ဤသည်ဤအစားအသောက်၏အဆင်ပြေသည်။ဘာစားရမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းနေစရာမလိုပါဘူး။ရှေ့ရက်များအတွက် သင်၏ အစားအသောက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိပါသည်။
ဤသည်မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ၊ မိုနို-အစားအသောက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်က အစားအစာတစ်မျိုးတည်းကို အသုံးပြုရန်နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာသည့်မုဒ်သို့ ပြောင်းရန် အချိန်မရှိပါ။ထို့အပြင် လေ့လာမှုများအရ တစ်နေ့ထက်နည်းသော မိုနိုအစားအသောက်များသည် အဆီလောင်ကျွမ်းမှုအတွက် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။
ဤအစားအသောက်များတွင် ရလဒ်များကို ပရိုတင်း-ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် အစားထိုးခြင်းနှင့် ကယ်လိုရီစားသုံးသော အရေအတွက်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။သင်နေ့စဉ် အစားအစာ တစ်မျိုးကို စားပြီး ပရိုတင်း ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် နှင့် မရောနှောဘဲ အဆီများကို ပိုမို ထိရောက်စွာ ချေဖျက်နိုင်စေပါသည်။
အစားအစာများကို ပြုတ်ခြင်း၊ ပြုတ်ခြင်း၊ ဖုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ကြော်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆီထည့်ခြင်းတို့ကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။ထို့အပြင် စာရေးသူက တစ်နေ့ကို ကော်ဖီ ၁ ခွက်မှ ၂ ခွက်အထိ ကန့်သတ်ထားရန် အကြံပြုထားသည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ သကြားမရှိပါ။သူမရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်အရ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး 1.5လီတာ ဓာတ်ငွေ့မပါဘဲ လက်ဖက်ရည် ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်သတ္တုရေကို သောက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။သို့သော် အစာမစားမီ မိနစ် ၃၀ သို့မဟုတ် တစ်နာရီအကြာတွင်သာ အရည်ကို သောက်သင့်သည်။
ဗိုက်ဆာတဲ့ခံစားချက်က သင့်ကို မရှုံးနိမ့်စေဖို့အတွက် အစားအစာအားလုံးကို 4-5 ဧည့်ခံပွဲအဖြစ် ခွဲလိုက်ပါ။ပြီးတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကြားကာလတွေမှာ ကပ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။စားချင်လားသွားစားတယ်။ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးကြမ်းသောက်ပါ။
အစားအသောက်ကို နှစ်ပတ်ဆက်တိုက် မှီဝဲနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားမှုမတိုင်ခင် အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်လောက် အနားယူဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ဤအရာအားလုံးနှင့်အတူ, အစားအသောက် contraindicated:
အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ ပန်ကရိယ၊ နှလုံး၊ endocrine စနစ် (အထူးသဖြင့်ဆီးချိုရောဂါ)၊
သို့သော်၊ ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်မှုမဟုတ်သော်လည်း၊ သင်အလုပ်လုပ်ပါကထိုကဲ့သို့သောအစားအစာကိုလိုက်နာရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ဒါကြောင့် အားလပ်ရက်မှာ သိမ်းထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ပန်းပွင့်အစားအစာ - နေ့တိုင်းပွင့်ချပ်
အခု ဒီဆွီဒင်အမျိုးသမီး ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကို အနီးကပ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ပထမနေ့တွင်၊ ၅၀၀ ဂရမ်ထက်မပိုသောငါးကိုသာစားရန်အဆိုပြုသည်။ထုံးစံအတိုင်း၊ တစ်ထိုင်တည်း မစားသင့်ဘဲ တစ်နေ့တာလုံး ခွဲစားပါ။ဤ 500 ဂရမ်မှသင်သည် cutlets စုံတွဲတစ်တွဲကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ငါးကိုမီးဖို၌ဖုတ် (သို့) အကင်ပေါ်တွင်ချက်ပြုတ်နိုင်ပြီး၊ ရေ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်ငါးများပါ ၀ င်သောစွပ်ပြုတ်များနှင့်ငါးဟင်းချိုပင်။
ဥပမာ မီနူးတစ်ခုသည် ဤကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်-
နံနက်စာ - ပြုတ်ထားသော ငါးပြေမအသားလွှာ (cod, hake သို့မဟုတ် pike perch);
နေ့လယ်စာ- ပိန်ငါး (ဥပမာ-ငါးကြင်း) ဇီယာစေ့နှင့် နံနံပင် သို့မဟုတ် ငွေငါးကြင်းပါးပါးလှီး၊
သရေစာ- ငါးအသားလုံး၊ ဘွိုင်လာနှစ်ထပ် သို့မဟုတ် ငါးဟင်းချို (ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသာ)။
ညစာ- ပြုတ်ထားသော pike perch သို့မဟုတ် ငါးကင်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် 1500 ဂရမ်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ကုသနိုင်ပါသည်။၎င်းတို့သည် glycemic အညွှန်းကိန်းနိမ့်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်သည် - zucchini၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ သခွားသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ရွှေဖရုံသီး၊သကြားထည့်ထားတဲ့ စည်သွပ်ဘူးတွေချည်းပဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အသုပ်နဲ့ အသီးအရွက်စိမ်းတွေကို သင်ကိုယ်တိုင် ကန့်သတ်ထားဖို့ မလိုပါဘူး။စွပ်ပြုတ်၊ ပန်းကန်လုံးတစ်လုံး၊ ဒါမှမဟုတ် အသီးအရွက်ဖျော်ရည်တစ်ခွက်ကို စတိုးဆိုင်မှာ မဝယ်ဘဲ သောက်နိုင်ပါတယ်။
နံနက်စာ- သစ်ကြံပိုးခေါက် သို့မဟုတ် vanilla ဖြင့် ခြစ်ထားသောမုန်လာဥနီ၊
နေ့လည်စာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ်သို့မဟုတ်အာလူးထောင်း, vinaigrette;
သရေစာ- အာလူးပြုတ်၊ ပြုတ်ထားသော ဂေါ်ဖီထုပ် သို့မဟုတ် ပေါင်းထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊
ညစာ - အသုပ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကင်။
တတိယမြောက်နေ့တွင် ကြက်သား ၅၀၀ ဂရမ်ကို ဆုအဖြစ် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ဘာ့ကြောင့်ဆုရလဲ။ဟုတ်တယ်၊ ဒီပမာဏကနေ အရသာရှိပြီး အာဟာရရှိတဲ့ အရာတွေကို အများကြီး ချက်ပြုတ်နိုင်လို့ပါပဲ။စကားမစပ်၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အစားအသောက်၏ မည်သည့်နေ့ရက်တွင်မဆို အစားအသောက်များတွင် အကန့်အသတ်မရှိ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဟင်းလျာများအတွက် သင့်လျော်သော ရွေးချယ်မှုများမှာ ကြက်ပြုတ် သို့မဟုတ် ဖုတ်ထားသော ကြက်ပြုတ်ရည်ဖြစ်သည်။
နံနက်စာ - ပြုတ်ကြက်သားလွှာ;
သရေစာ - ကြက်ပြုတ်ရည် သို့မဟုတ် ကြက်ကင်;
သီးနှံစေသည်။လုံးဝစီရီရယ် 200 ဂရမ် (မချက်ပြုတ်မီ) ထက်မပိုစေရ။အမျိုးအစားတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းကို မှီဝဲနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် တစ်နေ့တာလုံး စီရီရယ်များစွာကို သင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။တောဆန်၊ ပြောင်းဆန်၊ ဂျုံစပါး၊ oatmeal ကို ရွေးချယ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
နံနက်စာ - ရေပေါ်တွင် oatmeal;
နေ့လည်စာ - နံ့သာမျိုးနှင့်အတူရေပေါ်တွင် buckwheat ဂျုံယာဂု;
သရေစာ- နှမ်းစေ့ဖြင့် ရေပေါ်တွင် ဆန်ယာဂု၊
ညစာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် buckwheat ဂျုံယာဂု။
တစ်နေ့လျှင် အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ 500 ဂရမ်စားသင့်သည်။အထူးသဖြင့် အဆီမပြန်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ထို့အပြင်၊ သင်သည်အချို့သော kefir၊ အဆီနည်းဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်နို့ကိုသောက်နိုင်သည်။
နံနက်စာ- ဒိန်ချဉ်နှင့်အတူ အဆီမပါသော အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊
နေ့လည်စာ - နို့နှင့်အတူအဆီမပါသောအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ;
သရေစာ- ဖြည့်စွက်စာများမပါဘဲ အဆီမပါသော အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊
ညစာ- ဒိန်ချဉ်နှင့် အဆီမပါသော အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ။
အသီးအနှံ 1500 ဂရမ်ကို စွန့်ပစ်ပါ။၎င်းတို့ကို အစိမ်းစားခြင်း၊ အသုပ်ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျော်ရည်များ သောက်နိုင်သည်။ဒါက မင်းအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။
နေ့ရက်တိုင်းတွင် လက်ဖက်ရည်နှင့် ဓာတ်သတ္တုရေကို သောက်သုံးနိုင်သော်လည်း ကော်ဖီကို ဖယ်ထုတ်ပါ သို့မဟုတ် စားသုံးမှု အနည်းဆုံးအထိ လျှော့ချပါ။ဟုတ်တယ်၊ သကြားကို စွန့်ရမယ်။
မနက်စာ - ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်နဲ့ ပန်းသီးနီနှစ်လုံး၊
နေ့လည်စာ - ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးနှင့် ကီဝီသီးသုံးလုံး၊
သရေစာ- စပျစ်သီးတစ်စည်းနှင့် လိမ္မော်သီးတစ်လုံး၊
မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် အလင်းယောင်ထင်ယောင်ထင်မှားမဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့၊ အစားအသောက်အမည်ကို မှန်ကန်စွာဖတ်ပါ။ပွင့်ချပ်ခြောက်ပွင့် အမှန်တကယ်ရှိပြီး အစားအသောက်ခြောက်မျိုးကို အစားထိုးရန် လိုအပ်သော်လည်း အစားအသောက်မှ ရုန်းထွက်ခြင်းကဲ့သို့သော အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုရှိသည်။မင်းဘာမဆိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မင်းသိတဲ့နေ့။
ဒီနေ့ရဲ့ အဓိကအချက်က သင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ တစ်ဝက်လောက်ကို ပြန်ရဖို့ အများကြီး အနားယူဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။တစ်စုံတစ်ဦးမှ ဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်ရန် အကြံပြုထားပြီး အစားအသောက်တွင် သင်စားသော အစားအစာများကိုသာ စားရန် အကြံပြုထားပြီး ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အနည်းငယ် တိုးပေးပါ။
အစွန်းရောက်နည်းလမ်းများကို ထောက်ခံသူများက လွယ်ကူသောနည်းလမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် သတ္တမနေ့ကို ရေပေါ်တွင်သာ ကုန်ဆုံးရန် အကြံပြုပြောဆိုကြသည်။ဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုထဲက ဘယ်ဟာကို ပိုကြိုက်လဲ - သင်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းလက်ကို ဝှေ့ယမ်းပြီး အရသာရှိတဲ့ ကိတ်မုန့်ကမ္ဘာထဲကို ပြန်ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဝိတ်ကျဖို့ ဆုံးဖြတ်ရင် ဒီအစားအသောက်က ကူညီပေးမှာလား။ဟုတ်ပါတယ် ဆွီဒင်တွေက အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်။သင်ကြိုးစားပါက၊ သင်တစ်နေ့လျှင် ၀. ၆-၀. ၉ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
ပြိုကွဲခြင်းမရှိဘဲ ရှင်သန်နိုင်ပါသလား။အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အဖြေတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အစားအသောက်က အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး ပေါင်မုန့်တစ်ဖဲ့ကို တောင့်တပြီး လွမ်းဆွတ်မနေဖို့ လုံလောက်အောင်စားနိုင်စေတယ်။
သို့သော်လည်း ၎င်း၏ ထိရောက်မှုအားလုံးအတွက် "၆ ပွင့်ချပ်" သည် သင်၏အနာဂတ်အစားအသောက်ပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးပေ။အစားအစာ၏ခြောက်ရက်ကုန်လွန်သောအခါ၊ သင်သည်သင်၏ပုံမှန်အစားအစာသို့တစ်ဖန်ပြန်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ဆုံးရှုံးသွားသောကီလိုဂရမ်ကိုသင့်ထံပြန်ပေးလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့် သင်သည် ဤအစားအသောက်ကို စားသုံးနေလျှင်ပင်၊ ၎င်းကို ကျန်းမာသန်စွမ်းသော အနာဂတ်ဆီသို့ ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ် မြင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့် အစားအစာမီနူးဖြင့် နေ့စဉ်
ကိုယ်အလေးချိန် ပိုတက်လာရခြင်း အကြောင်းရင်းများမီနူးတစ်ခုဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် အထိရောက်ဆုံး အစားအစာ ၁၀ ခု။ဘယ်လိုရလဒ်တွေ ရနိုင်မလဲ။
27 ဇွန် 2022
တစ်လအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ၊ အာဟာရပညာရှင်များထံမှ အသုံးဝင်သော အကြံပြုချက်များ။
26 ဇွန် 2022
ကျွန်ုပ်တို့သည် kefir အစားအသောက်တွင်မှန်ကန်စွာကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်။
Kefir ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနည်းစနစ်သည် ၃ ရက်တာအတွက်5ကီလိုဂရမ်ထက် ပိုကျစေပါသည်။kefir 1% ကို "ထိုင်" နှင့်ရေများများသောက်ရန်3ရက်လုံးလိုအပ်သည်။ခန္ဓာကိုယ်ကို လုံးဝချွတ်ပြီး အပိုပေါင်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက် ပုံမှန်မီနူးရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို မေ့ထားဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
20 ဇွန် 2022